Al-shabaab oo weerar Qaraxyo ku bilowday saaka kula wareegay degaanka… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-shabaab oo weerar Qaraxyo ku bilowday saaka kula wareegay degaanka…
Ardaan Yare 3 April 2021
Wararka aan ka heleyno Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in aroornimadii hore ee saakay dagaal u dhexeeyay Ciidanka dowladda Federaalka iyo Al-shabaab uu ka dhacay degmada Awdheegle iyo deegaanka Bariire.
Dagaalkaan ayaa waxaa uu ka dambeeyay, kadib markii Al-shabaab ay weerar ku bilowday Qaraxyo ku qaadeen Saldhiga Ciidamada dowladda ay ku leeyihiin Awdheegle iyo deegaanka Bariire ee Shabeellaha Hoose.
Dadka deegaanka ayaa waxaa ay ku warrameen in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, ayna maqlayeen jugta Qaraxyo iyo rasaas daba socotay, isla markaana uu jiro khasaaro kala duwan, wallow aysan xaqiijin karin inta uu la egyahay.
Al-shabaab warar barahooda qadka ay ku qoreen ayaa waxaa a ku sheegeen in saakay weerar ku bilowday Qaraxyo ay ku qaadeen Saldhiga Ciidamada dowladda ee Awdheegle iyo Bariire, ayna la wareegeen gacan ku heynta Saldhigyada.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa waxaa ay intaas kusii dareen in Dhammaan wixii gaadiid ahaa ee saldhigyada la weeraray yaalla ay gacanta ku dhigeen, waa ay hadalka u dhigeen shabaabka, si rasmi ahna looma oga khasaaraha ka dhashay weerarka.
Saraakiisha Ciidamada dowladda Federaalka ee ku sugan Gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weli ka hadlin weerarkii saakay Al-shabaab ay ku qaadeen Saldhigyada Ciidamada ay ku leeyihiin Awdheegle iyo Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Shirka Madaxda iyo Maamul Goboleedyada oo Maanta furmaya